Imaaraatka Carabta Burundi iyo Rwanda oo lagu daray “liiska cas” ee dalalka laga mamnuucay in dadkoodu ay safarro ku tagaan UK. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Imaaraatka Carabta Burundi iyo Rwanda oo lagu daray “liiska cas” ee dalalka...
Imaaraatka Carabta Burundi iyo Rwanda oo lagu daray “liiska cas” ee dalalka laga mamnuucay in dadkoodu ay safarro ku tagaan UK.
Imaaraatka Carabta, Burundi iyo Rwanda ayaa lagu daray “liiska cas” ee dalalka laga mamnuucay in dadkoodu ay safarro ku tagaan UK.
Tallaabada,oo looga gol leeyahay joojinta faafitaanka nooca cusub ee Coronavirus ee ka soo unkamay Koofur Afrika, ayaa dhaqan galaysa maanta oo Jimco ah.
Dadka u dhashay Britain, Ireland iyo kuwa xaqa degganaanshaha ku leh Ingiriiska ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan dalkaas balse waxay ku qasban yihiin inay muddo 10 maalmood ah guriga isku karantiilaan.
Tiro ka tirsan dadka caanka ka ah baraha bulshada ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay booqday Dubai iyadoo UK ay mamnuucday safarrada aan muhiimka ahayn.
Waxay ku adkeysteen in safarradooda ay ahaayeen kuwo shaqo, balse Waaxda Gaadiidka ayaa sheegtay inaysan jiri doonin cid loo eegayo xaalad gaar ah, sida safarrada shaqada ku saabsan.
Sidoo kale waxaa la mamnuuci doonaa duullimaadyada sida tooska ah uga timaada Imaaraatka Carabta.
Imaaraatka Carabta wuxuu ahaa halka ugu badan ee ay dalxiiska ku tageen dadka UK bishii November 2020, iyadoo 84,500 oo rakaab ah ay isaga kala gooshayeen dalkaas, sida laga soo xigtay Waaxda Duullimaadka Cirka. Dalalka kale ee ay muwaaddiniinta UK sida aadka ah u booqdeen waxaa ka mid ah Hindiya (54,000), Qadar (38,000) iyo Vietnam (36,000).
Imaaraatka ayaa dalkii 33-aad ku noqonaya dalalka ay UK ka mamnuucday safarrada.
Laga bilaabo maanta saacadda marka ay tahay 04:00 dhammaan dadka ka imaanaya dalalkaas ayaa ku qasbanaan doona inay si degdeg ah isu karantiilaan, lagamana oggolaan doono inay baaritaan isku sameeyaan si ay uga baxaan karantiilka.
Wasiirka Gaadiidka UK Grant Shapps ayaa sheegay in rakaabka loo oggolaado inay galaan UK laga doonayo warqad caddeyneysa inaysan fayraska qabin iyo inay buuxiyaan foomka rakaabka, haddii kalena laga qaadi doono labo ganaax oo min £500 ah.
Muwaaddiniinta Britain ee haatan ku sugan Imaaraatka Carabta ayaa loo oggol yahay inay adeegsadaan habka ay ku imaan karaan UK, sida ay sheegtay Waaxda Gaadiidka.
Maamulka Garoonka Dubai ayaa sheegay in dhammaan duullimaadyada tooska ah ee lagu waday inay UK tagaan abbaaro 13:00 maanta oo Jimco ah dib loo dhigay rakaabkana loo sheegay inaysan imaan garoonka.
Shirkadda Etihad Airways ayaa sidoo kale sheegtay in dhammaan duulimaadyadeeda rakaabka ee aadi lahaa UK la joojin doono xilligaas ilaa maar dambe.
Waxay arrintan ku soo aadeysaa kaddib markii ay dowladda UK Arbacadii ku dhawaaqday shuruuc adag oo safarka ah.
Maalintii shalay ahayd, 1,239 oo qof oo dheeraad ah ayaa ku dhintay UK muddo 28 gudahood ah.
Previous articleBooliiska Talyaaniga oo baraya cayaar yahanka kooxda Juventus Cristiano Ronaldo markii la sheegay inuu safar u baxay si uu uga qeyb galo dhalashada gacalisadiisa.
Next articleBanaanbax lagu taageerayo go’aanka uu madaxweynaha uu ku ansixiyay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho mataalada Aqalka Sare oo loo xiray Wadooyinka..
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya oo Madaxa Waxbarshadda Bariga iyo Koofurta...
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar (Cabdullahi Carab) iyo Madaxa Waxbarshadda Bariga iyo Koofurta Afrika Muna Salih Meky ayaa Aaladda Fogaan Aragga (Zoom meeting)...
Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay ciidamo cusub oo ka mid...
Ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara Denmark Christian Eriksen oo Xalay...
Ku dhawaad 43 oo muhaajiriin ah oo ku qaraqmay...
Wasiirkii arimaha Gudaha ee Galmudug oo sharci darro ku tilmaamay tallaabadii...
Booliska Islii oo soo badbaadiyay Gabar Soomaali ah oo afduub loo...